Ahoana ny famindrana na fandikana rakitra na lahatahiry amin'ny Linux? | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny famindrana na fandikana rakitra na lahatahiry amin'ny Linux?
Betsaka amintsika, raha tsy ny ampahany lehibe indrindrae zatra mampiasa interface grika izahay na tontolon'ny birao raha tsy hiteny. Ny lahasa mihetsika, manova, Omeo anarana ireo rakitra na lahatahiry hafa mazàna dia atao amin'ny fomba tsotra amin'ny tsindry roa fotsiny izy ireo.
fa inona no mitranga rehefa mila mampiasa ireo hetsika ireo amin'ny mpizara ianao satria ny ankamaroan'izy ireo dia matetika no tsy mitondra afa-tsy amin'ny console console, dia mazàna ao anaty lozisialy voatokana no misy azy io tsy maharary mihitsy ny mahafantatra hoe ahoana no anaovana an'io satria tsy fantatrao mihintsy hoe rahoviana izy io mety ho be atao.
Nitranga tamiko fa indraindray dia very ny tontoloko sary ary mila mampiasa ny console aho hahafahako mamerina azy io, saingy teboka iray hafa izany.
Ny andron'ny androany aho tonga hizara aminao ny baiko vitsivitsy izay hanampy antsika mba hanatanterahana ny asa fandikana na famindrana rakitra.
1 Ahoana ny famindrana rakitra na lahatahiry amin'ny Linux?
2 Ahoana ny fandikana rakitra amin'ny Linux?
Ahoana ny famindrana rakitra na lahatahiry amin'ny Linux?
Ny zavatra voalohany dia ny fananana terminal izay ho fitaovantsika hanampy antsika amin'izany rehetra izany, ny zavatra faharoa dia ny famoronana lahatahiry sasany misy antontan-taratasy ao anatiny izany mba tsy hanimba na hanary vaovao.
Ny zavatra mahazatra indrindra dia ny mamindra fisie rakitra noho izany dia hampiasa ny baikon'ny mv isika:
Ity ataontsika ity dia ny famindrana ny file.txt mankany amin'ny fampirimana fitsapana izay ao anaty fisie antontan-taratasinay. Ho an'ity dia raisinay an-tsaina fa miorina amin'ny lahatahiry misy ny file.txt izahay izao
Rehefa te-hifindra rakitra mihoatra ny iray indray mandeha isika, ny karazana syntax dia ireto manaraka ireto:
ankehitriny zavatra tena ilaina dia ny fampiasana a * rehefa manana fotony mitovy amin'ny anarany ny rakitra, ohatra:
Torohevitra: baiko maherin'ny 400 ho an'ny GNU / Linux izay tokony ho fantatrao 😀
Ka, araka ny hitantsika, manana ny fototra "AMD" mitovy izy ireo hamindrana ireo rakitra rehetra ireo miaraka amin'ny nomenclature fototra ihany, dia izao manaraka izao no ataontsika:
Toy izany koa no mihatra amin'ireo rakitra rehetra misy karazany mitovy, ohatra, .doc, .xls, .deb, .rpm sns. Mba hamindrana azy ireo dia ny fampiharana ihany no ampiharintsika
Hatramin'io fotoana io dia somary mazava ny fomba fiasa sy ny fomba hanamorana ny asa amin'ny fomba isan-karazany, fa inona no mitranga rehefa te-hamindra izay rehetra manana lahatahiry isika, na ny fisie na ny subfolders.
Ho an'ity dia hampiasainay ny *, ohatra, te-hamindra ny zava-drehetra izay navoakako avy tamin'ny WordPress ka hatramin'ny lahatahiry roa teo aloha:
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny baiko azontsika ampiasaina ny lehilahinay na miaraka amin'ny parameter -help, dia ho hitantsika eto ny masontsivana rehetra.
Ahoana ny fandikana rakitra amin'ny Linux?
Ho an'ity tranga ity saika mitovitovy amin'izany, mba hamindrana rakitra na lahatahiry isaky ny iray hafa, eto tazomy amin'ny toerana niandohany ireo rakitra sy lahatahiry ary mamorona kopia amin'ny lahatahiry voafantina.
Un baiko tsotra handikana rakitra na folder avy amin'ny lahatahiry mankany amin'ny iray hafa:
Fomba iray mazava kokoa hijerena azy:
Ity baiko ity dia matetika ampiasaina betsaka hanamboarana backup na fisie izay hovaina, satria mamorona kopia iray manontolo, nefa misy anarana hafa, ohatra azo ampiharina:
Para mandika rakitra na lahatahiry marobe:
ankehitriny raha te-handika izay rehetra misy fampirimana izay toerana misy antsika mankany amin'ny lahatahiry hafa:
Raha te-handika lahatahiry iray amin'ny toerana iray isika
Zava-dehibe ny ho ambaratonga iray eo ambanin'ny lahatahiry izay halaintsika, satria raha ao anatiny isika dia mila faritana ny lalana feno, satria raha mametraka ny baiko amin'ny fomba nametrahako azy fotsiny aho dia hamorona lahatahiry foana.
Ary farany, raha te hahalala ny masontsivana rehetra izy dia miankina amin'ny lehilahy aminy na miaraka amin'ny fanampiana-
Raha tsy misy ado hafa dia baiko fototra tokoa izy ireo, ny fampiasan'izy ireo dia afaka manampy anao betsaka ary tokony hitandrina miaraka amin'izy ireo aza ianao satria amporisihina hampiasa ny endrika recursive foana, izay ampiasana amin'ny parameter -R.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny famindrana na fandikana rakitra na lahatahiry amin'ny Linux?
Jorge C Rodriguez S dia hoy izy:
Raha te handika ny rakitra rehetra avy amin'ny fampirimana iray mankany amin'ny iray hafa aho dia avy eo
cp / * / anarana / fampirimana / toerana ??
mijoro ao anaty fampirimana izay ananako ireo rakitra tokony adika?
Valiny tamin'i Jorge C Rodriguez S
Juan Manuel Carrillo Campos dia hoy izy:
Te-handika firaketana manokana an-tsoratra avy amin'ny rakitra-loharano mankany amin'ny rakitra-toerana itodihana aho, indraindray dia rakitsoratra avy amina rakitsoratra-hatrany an-dàlam-pifandraisana, ahoana no fomba anaovako izany?
Valiny tamin'i Juan Manuel Carrilllo Campos
Inona no atao hoe Swap amin'ny Linux ary ahoana no fampiasana azy?